Isha bisadda Sillimanite. Mararka qaarkood loo yaqaan fibrolite - Video
Isha bisadda Sillimanite
Tags isha Cat ee, Sillimanite, Isha bisadda Sillimanite
Sillimanite bisadda isha dhagax macnaheedu waa dheefaha iyo qiimaha.
Iibso bisadda dabiiciga ah ee bisadda sillimanite dukaankeenna
Isha bisadda Sillimanite waxaa mararka qaarkood loo yaqaan 'fibrolite' maxaa yeelay kristantarradeedu waxay ku dhacaan kooxo, oo u eg fiilooyin.
Sillimanite waxaa laga helaa midabo kala duwan oo ay ka mid yihiin cagaar, jaalle, bunni, buluug, cadaan iyo xitaa madow. Jawharad waxaa lagu ogaan karaa inay tahay jawharad runti hufan, ama gebi ahaanba madmadow leh oo leh wax dhalaalaya waxak.
Ifafaalaha indhaha bisadda
Gemology, sheekaysiga, ama sheekeysiga ama saameynta indhaha ee bisadda, waa saameyn muuqaal ah oo muuqaal ah oo lagu arko dhagaxyada qaarkood, dhirta, iyo kaarboonka. Waxaa laga soo qaatay Faransiiska "œil de chat", oo macnaheedu yahay "isha bisadda", sheekaysigu wuxuu ka yimaadaa qaab dhismeedka burooyinka maaddada, sida quartz indhaha shabeelka, ama ka-mid ahaanshaha burooyinka ama godadka ku jira dhagaxa dhexdiisa, sida bisadda isha chrysoberyl. Duufaanta sababa sheeko xariirta ka jirta chrysoberyl ayaa ah macdan qumman, oo ka kooban inta badan titanium dioxide. Shaybaarada la baaray ma keenin wax caddeyn ah tuubooyinka ama fiilooyinka. Waxyaabaha jilicsan ayaa soo dejiya dhammaantood si qumman ula jaanqaadaya saameynta isha bisadda. Waxaa loo sababeeyey in cabbirka shaashadda ee mawaadiicdu uu la mid yahay mid ka mid ah saddexda faasas ee loo yaqaan 'orthorhombic crystal faeses' ee 'chrysoberyl', taas oo keeneysa in la doorbido iswaafajinta jihadaas.
Waxaa laga helaa adduunka oo dhan, Myanmar (Burma), Sri Lanka (Ceylon), USA, Czechoslovakia, India, Italy, Germany, iyo Brazil.
Macnaha bisadda indhaha Sillimanite ee muuqaalka iyo bogsiinta faa'iidooyinka guryaha
Dhagaxa indhaha bisadda Sillimanite wuxuu xoojiyaa tayada hoggaaminta qofka. Isha bisadda Sillimanite aad ayey waxtar ugu leedahay qofka si uu u horumariyo astaamaha hoggaaminta. Waxaa la soo jeediyey in la xidho dhagaxan, haddii qofku xukumo dayaxa. Waxay dheelitirtaa dhinaca shucuurta qofka. Isha bisaddu waxay ka caawisaa qofka xidhan inuu qaato go’aanka ugu fiican uguna caqliga badan nolosha. Waxay keentaa aragti waxa ka dambeeya xaaladaha nolosha qofka xiran. Dhagaxani wuxuu isu keenayaa caqliga iyo shucuurta jirka. Waxay kicisaa bogsiinta shucuurta.
Daaweeyayaashu waxay u arki karaan dhagaxan mid waxtar leh si loo waafajiyo chakras waxaana laga yaabaa inaad ogaato inaad ku isticmaasho chakra kasta waxay kaa caawin doontaa inaad dhammaan chakraska la jaan qaado Waa dhagax waxtar u leh dhakhaatiirta dawaynta jirka inay u adeegsadaan inay ka caawiyaan iyaga si ay u go'aamiyaan waxa macmiilkoodu u baahan yahay in laga caawiyo. U adeegso garaadkaaga inuu kaa caawiyo inaad go'aansato halka aad ku isticmaali lahayd, maadaama ay kaa caawin doonto wax kasta oo chakras ah oo aad dooran karto inaad ku isticmaasho.
Waa maxay isha bisadda sillimanite u fiican tahay?
Way kufiicantahay dadkaas ay lakulmaan dhibaatooyin maqaarka ah ama xasaasiyad. Sidoo kale way daali karaan kuwa, kuwaas oo qorraxdooda aan awood u lahayn jaantusyadooda dabiiciga ah iyo kuwa taariikhda dhalashada ay yihiin 1 iyo 8.
Waa maxay faa iidooyinka dhagxaanta indhaha bisadu?
Dhagaxa qaaliga ah wuxuu fududeyn karaa khalkhalka maskaxda ee sababaya faaruqinta baahida. Waxay jebin kartaa walwalka. Xirashada indhaha bisadda waxay ku siin kartaa maskax badan oo caan ah waxayna dib u dhisi kartaa xusuusta. Kuwani dhammaantood waa faa'iidooyinka muhiimka ah ee dhagaxa.
Maxay yihiin faa'iidooyinka dhagaxa indhaha ee bisadu?
Xiro dhagxaanta indhaha bisadu waxay gacan ka geysan kartaa la qabsiga inta badan khibrad la’aanta, taasoo keeneysa nabad iyo wada noolaansho. Waxay ka caawisaa qofka inuu ka go'doomo lifaaqyada maadiga ah, helitaanka iftiiminta ruuxiga ah. Awoodda Ketu waxay gacan ka geysan kartaa horumarka ruuxi ah, gaar ahaan haddii aad tahay wacdiye ama doon doon diin.
Qiimaha dhagxaanta indhaha ee sillimanite ee dabiiciga ah iyo qiimaha halkii carat ee dukaankeenna:
Isha bisadda Sillimanite ee iibka ah dukaankeenna qaaliga ah
Waxaan sidoo kale ka sameysanay dahab indhaha bisadda sillimanite la isku qurxiyo sida faraanti gelinta, silsilado, hilqado dhejis ah, jijimmo, suumanka… Fadlan nala soo xiriir xigasho.
Bisad isha bisad
Kornerupine indhaha bisadda
Danburite isha bisadda
Aquamarine indhaha bisadda
GEMS cusub ayaa la heli karaa